एका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गर्दै भदौ २५ गते विहिबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस !
Homeबिबिधएका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गर्दै भदौ २५ गते विहिबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस !
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल भाद्र २५ गते बिहिबार इश्वी सन २०२० सेप्टेम्बर १० तारीख आश्विन कृष्णपक्ष अष्टमी तिथी रोहिणी नक्षत्र पश्चात मृगशिरा नक्षत्र वज्र योग वालव करण चन्द्रंमा बृष राशिमा आनन्दादि योगमा उत्पात योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अष्टमी श्राद्ध, अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा जितिया पर्व जीवत्पुत्रिका व्रत (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नजिकका आफन्तजनहरु बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ । संचित रकम खर्चगर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोछ । वाणीका कारण सामान्य बादविवादको झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोछ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) प्रेम सम्बँन्धमा मधुरता छाउनेछ । अध्यन अध्यापनमा लगाईएको समय महत्वपूर्ण रहनेछ नयाँ योजनाका साथमा नयाँ कार्यको थालनि गर्ने उत्तम समय रहेकोछ । शिप तथा क्षमताका आधारमा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । पारीवारिक साथसहयोगमा ब्यापार ब्यवसायबाट मनग्यलाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
को बन्ला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सीईओ ?
माइक्रो-टेम्पो चालकको प्रश्न- हामीले चाहिँ भात खानै नपर्ने हो र ?